I-bungalow Eduze ne-Downtown Willoughby - I-Airbnb
I-bungalow Eduze ne-Downtown Willoughby
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Derek
Ikamelo elinombhede ogcwele. Ukupaka okuningi okunendawo enkulu yokungena imoto. Ibanga lokuhamba ngezinyawo noma i-Uber ukuya e-Downtown Willoughby enezitolo ezinhle kakhulu zokuthenga, izindawo zokudlela, nama-bar. Idekisi, i-grill, kanye negceke elingemuva lemisebenzi yangaphandle.
Ngenxa yokufunwa kwakamuva nokushiwo abanye inani linyukile. Ngikukhumbuza ukuthi ngihlala lapha futhi angikwazi ukuqinisekisa ukuphelela kanye ne-thermostat evulekile. Uma ufuna lokho kukhokha kabili noma kathathu emgwaqweni. Lokhu kuhloswe njengomusa kubahambi bebhajethi ephansi, sicela ungakulimazi lokho.
Ukuphila okulula okunethezekile.
Indlu yami isemzileni kahulumeni, amamayela angu-1,3 ukusuka e-Downtown Willoughby engokomlando, futhi iseduze nomngcele we-Willoughby/Mentor. Amapaki aseLake Erie namabhishi ngemizuzu engu-15 uhamba ngemoto.
Uma izivakashi zami zifuna ukuxoxa, ngihlale nginesithakazelo sokuzwa izindaba zazo nokwabelana ngami. Uma ungathanda ukugcina ngasese ngizohlonipha lokho futhi.